Taratasy mahafinaritra ho an'ny afisy: fanangonana ireo endri-tsoratra tsara indrindra | Famoronana an-tserasera
Nerea Morcillo | | loharanom-baovao, dia midika hoe
Ny afisy, na dokam-barotra na lohahevitra hafa, dia nahaliana foana noho ny karazan-tsary isan-karazany ao anatiny. Ny iray amin'izy ireo dia endri-tsoratra, miankina amin'ny fianakaviany sy ny fomba fanoratana azy, Mety mahasoa sy mety amin'ny karazana afisy iray na hafa izy ireo.
Raha nanontany tena foana ianao hoe inona no endri-tsoratra no mety indrindra amin'ny afisy, ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanampy anao hamantatra an'io fanontaniana io izay ao an-tsainao be dia be ianao ary hazavainay koa ny antony mahaliana azy ireo ary inona no mahatonga azy ireo ho mora vakiana.
1 ny fianakaviana samihafa
1.2 Tsorakazo maina
1.3 misy soratra
1.5 Serif sy Sans Serif
2 Ny endritsoratra tsara tarehy indrindra
ny fianakaviana samihafa
Mba hahafantaranao hoe iza amin'ireo typography no mety indrindra amin'ny afisy, dia mila mahafantatra ianao inona ny karazana typografika misy. Noho izany dia nanamboatra torolalana kely ho anao izahay izay tokony hotadidinao isaky ny mipoitra ny fanontaniana: Inona no typography apetrako izao? Eny ary, andao hanomboka.
litera romana, dia ireo endritsoratra avy amin'ny fanoratana tanana. Izy ireo dia miavaka amin'ny hoe efa antitra ary avy amin'ny calligraphy maha-olombelona tamin'ny taonjato XV. Izy ireo koa dia matetika tafiditra ao anatin'ny fitoraham-bato romana, hetsika iray misy ny famolavolana typography amin'ny alàlan'ny taho kely vita amin'ny vato.
Eo amin'ny bika aman'endriny dia tsy tapaka izy ireo ary manana fifanoherana lehibe amin'ny singa mahitsy sy miolikolika ary tena azo vakiana ihany koa. Misy karazany maro:
taloha: niseho tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX tany Frantsa, avy amin'ny sarin'i Grifo ho an'i Aldo Manuzio. Izy ireo dia miavaka amin'ny tsy mitovy hatevin'ny taho ao anatin'ny litera iray ihany, amin'ny alalan'ny modulation azy sy ny endrika telozoro sy concave amin'ny finial, miaraka amin'ny teboka efamira malina.
Tetezamita: niseho tamin’ny taonjato fahavalo ambin’ny folo ary asehon'izy ireo ny fifindran'ny karazany romanina taloha sy maoderina, miaraka amin'ny fironana miavaka amin'ny fanovana ny tahony kokoa sy ny fampifanoherana azy ireo amin'ny finials, izay mamela ny endrika telozoro mba haka ny concave na marindrano, mampiseho fiovaovana lehibe eo amin'ny kapoka.
Maoderina: niseho tamin'ny tapaky ny taonjato faha-XNUMX, noforonin'i Didot, taratry ny fanatsarana ny milina fanontam-pirinty. Ny tena mampiavaka azy dia ny fifanoherana misongadina sy tampoka amin'ny tsipika mahitsy sy sisintany, izay miainga amin'ny endritsoratra kanto sy mangatsiaka miaraka. Ny endri-tsoratra dia henjana sy mirindra, miaraka amin'ny finials tsara sy mahitsy, mitovy ny hateviny foana, miaraka amin'ny andry mifanipaka be ary ny modulation mitsangana voamarika sy henjana.
Meccanos: tsy manana modulation na contrast izy ireo. Anisan'ny loharano azony asongadina isika Lubalin sy Stymie.
Incision: vondrona mitoka-monina iray hafa ao anatin'ny Romanina izy ireo, toa ny Meccans, dia tononkira amin'ny fomban-drazana romana tranainy indrindra, somary mifanohitra ary misy endri-javatra manify manify.
Ny endri-tsoratra Sans-serif, fantatra amin'ny anarana hoe Gothic, Egyptian, Sans Serif na Grotesque, dia matetika mizara ho vondrona roa lehibe:
Linear tsy misy modulation: izy ireo dia miforona amin'ny karazana hatevin'ny tsipika fanamiana, tsy misy fifanoherana na modulation, ny maha-izy azy dia geometrika.
Grotesque: miavaka amin'ny hoe ny hatevin'ny tsipika sy ny fifanoherana dia zara raha tsapa ary noho izy ireo tena azo vakiana amin'ny lahatsoratra mihazakazaka. Ny endritsoratra lehibe amin'ity karazana ity dia Gill Sans.
Ny endri-tsoratra misy litera matetika dia karazana endri-tsoratra mahazatra. Ny fomban-drazana tafahoatra dia miankina amin'ny fomba nandrafetana azy, satria izy ireo dia endri-tsoratra tena mamorona noho ny toetrany avo lenta.
Izy ireo dia sokajiana ho vondrona telo lehibe:
Calligraphic: ireo fianakaviana ireo novokarina miaraka amin'ny fiantraikany isan-karazany indrindra: Roman rustic, Carolingian minuscule, litera anglisy, uncial sy semi-uncial, samy mifototra amin'ny tanana namorona azy ireo. Rehefa nandeha ny fotoana dia nanjary haingo kokoa ny fanoratana calligraphic.
Gothic: Manana rafitra matevina izy ireo, firafitry ny henjana ary mitsangana mitsangana, mandoto ny pejy amin'ny fomba miavaka izy ireo. Ankoatra izany, tsy misy ifandraisany amin'ny litera, izay vao mainka manamafy ny tsy maha-zava-dehibe azy.
Italic: mazàna izy ireo dia mamoaka sora-tanana tsy ara-potoana, malalaka na latsaka. Tena lamaody izy ireo tamin'ny taona 50 sy 60, ary hita amin'izao fotoana izao fa misy fitsanganana indray.
Izy ireo dia endri-tsoratra natao manokana ho an'ny lohateny satria tsy natao hovakiana, noho ny fisian'ny famolavolana azy. Izy ireo dia sokajiana amin'ny:
Fantasy: somary mitovitovy amin'ny satroka mitete midina amin'ny Moyen Âge izy ireo, Amin'ny ankapobeny dia tsy azo vakina izy ireo., noho izany dia tsy mety amin'ny famoronana lahatsoratra izy ireo ary ny fampiasana azy dia voafetra amin'ny lohateny fohy.
Fotoana: ireo ve izany natao hanoro fotoana, lamaody na kolontsaina, avy amin'ny hetsika toy ny Bauhaus na Art Decó. Izy ireo dia mametraka ny asa alohan'ny fombafomba, miaraka amin'ny kapoka tsotra sy voalanjalanja, saika mitovy foana.
Serif sy Sans Serif
Ny endri-tsoratra serif dia ireo izay miavaka amin'ny misy serif eo ivelany. Manana toetra mahazatra sy tranainy izy ireo, ary izy ireny koa dia hita ao amin’ny ankamaroan’ny pejin’ireo boky izay mamaky sy mandany fotoana tsara indrindra hamakiana. Ity pitsopitsony ity dia noho ny halalin'ny fahafaha-mamaky avo lenta.
Ohatra amin'ny endritsoratra serif ny Book Antiqua, Bookman Old Style, Courier, Courier New, Century Schoolbook, Garamond, Georgia, MS Serif, New York, Times, Times New Roman, ary Palatino.
sans serif fonts niseho tany Angletera tamin'ny taona 80. Tsy mitovy amin'ireo voalaza etsy ambony ireo fa tsy manana serif amin'ny farany izy ireo ary izany no mahatonga azy ireo hanana toetra ankehitriny sy maoderina kokoa.
Ny endri-tsoratra Sans serif dia misy Arial, Arial Narrow, Arial Rounded MT Bold, Century Gothic, Chicago, Helvetica, Geneva, Impact, Monaco, MS Sans Serif, Tahoma, Trebuchet MS, ary Verdana.
Ny endritsoratra tsara tarehy indrindra
Manaraka, asehonay anao ny lisitry ny endri-tsoratra mety mahaliana ny afisy. Ny tsirairay amin'izy ireo dia natao ho an'ny afisy hafa. Ianao izao no tsy maintsy misafidy izay tetikasa tsara indrindra amin'ny afisy.
Iray amin'ireo endri-tsoratra kanto sy voadio indrindra izy io, misy famelezana tanana izay mitazona toetra matotra. Tena ilaina izany raha mila manamboatra afisy dokam-barotra ianao mifandray amin'ny fizahan-tany, fitsangatsanganana, ary na dia ny sakafo aza. Na izany aza, afaka manao ny fitsapanao foana ianao na inona na inona sehatra na tsena.
Gilmer typeface dia endri-tsoratra tena tsara raha mitady afisy manokana mifandraika amin'ny tontolon'ny lamaody na hamorona endrika minimalista, amin'ny ankapobeny noho ny fomba geometrika Bold izay manome vokatra tsy mampino amin'ny lahatsoratra.
Fanampin'izany, ity endri-tsoratra ity dia manana ny endriny manokana antsoina hoe Gilmer Light, mitazona ny endriny mitovy, fa miaraka amin'ny endritsoratra manify.
Ny endri-tsoratra Aleo dia natao mba hahazoana a endrika mirona kokoa amin'ny afisy mahazatra miaraka amin'ny fahafahana manambatra azy ireo amin'ny dikan-teny hafa amin'ny Italic, BoldItalic, LightItalic, Regular, Light ary Bold.
Fanampin'izany, tsy endritsoratra dokam-barotra mahery vaika izy io noho ny bikany boribory, fa miantoka ny fahazoana vakiana tsara amin'ny lohateny sy lahatsoratra amin'ny afisy tsy ara-dalàna.
Endrika tsy mahazatra izy io ary vao mainka manintona kokoa. Karazan-tsoratra avy amin'ny fiaviana calligraphie ary ny anarany dia avy amin'ny aingam-panahy nananan'ny mpamorona ity endri-tsoratra ity, satria araka ny filazany, dia nahazo aingam-panahy tamin'ny varavarankelin'ny fanasan-damba izy ary namerina tao an-dohany ny mety ho endriky ny endri-tsoratra. .
Miavaka noho ny maha endritsoratra lehibe sy kanto amin'ny fotoana iray ihany, tsy soso-kevitra ho an'ny lahatsoratra izahay fa amin'ny lohateny, tena mety amin'ny dokam-barotra amin'ny sehatry ny hotely sy sakafo ary any amin'ny trano fisakafoanana.
Loharano: Envato Elements
Ny endri-tsoratra Coldiac dia manome fahatsapana kanto sy haitraitra amin'ny tetikasanao. Matetika izy io no ampidirina amin'ny afisy misy dokam-barotra misy menaka manitra sy firavaka. Ny endri-tsoratra Coldiac no tena tadiavinao raha mila mamerina ny afisin'ny fahalehibiazana sy ny fahamatorana ianao, tokony hojerenao ny tsipika manify sy manify Mampita kilasy be dia be izy ireo.
Amin'ity safidy ity dia hahatratra ny fifandanjana ilaina ianao mba hisongadina miaraka amin'ireo afisy manokana, fa aza mikasa ny hanoratra amin'ity endritsoratra ity. satria ny fampiasana azy dia tsy misy afa-tsy amin'ny lohateny noho ny tsy firindrana ny litera kely.
Tsy isalasalana fa iray amin'ireo endritsoratra malaza indrindra amin'ny sehatry ny famolavolana typografika. Anisan'ny fianakavian'ny serif izy io ary manana ny mampiavaka azy amin'ny famenoana maivana amin'ny litera kely sy lehibe, tsy toa an'i Sans Serif, izay nisafidianana fomba misy teboka eo amin'ny farany.
Amin'ny ankapobeny dia endritsoratra tonga lafatra ho an'ny orinasa sy akademika marika, izany no antony manasa anao hanandrana izany amin'ny fisehon'ny afisin'ny orinasanao.
Manantena izahay fa efa ampy ny antontan-taratasinao hamaliana ity fanontaniana ity izay nanontanianay ny tenanay tamin'ny fotoana tsy nahalalanay na inona na inona momba ny tontolon'ny endritsoratra.
Misy maro hafa manome ny toetra ilainao amin'ny tetikasanao, saingy navelanay ho anao ireo izay afaka manompo anao indrindra ho fanombohana. Araka ny hitanao dia naneho ohatra vitsivitsy isan-karazany izahay mba hahafahanao manao fitsapana maromaro miaraka amin'izy rehetra mandra-pahitanao ny fomba voalaza.
Tonga izao ny fotoana tsara indrindra ny fotoana hanaovana drafitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Hafatra mahafinaritra ho an'ireo afisy